फिचर « Clickmandu
४० लाख ऋण २२ वर्षमा कसरी भयो १८
काठमाडौं । तपाईंले ऋणबारे एउटा निकै पुरानो कथन पक्कै पनि सुन्नु भएकै होला । ‘साँवाको ब्याज, ब्याजको स्याज र स्याज प्याज’ नेपाली समाजमा निकै चर्चित कथन हो । पहिलेको जमनामा
१ खर्ब ‘सेल्स’ गर्ने बिजनेश हाउस बन्यो शंकर ग्रुप, छोराको साथले शंकरलालले पूरा गरे बुबाको सपना
काठमाडौं । व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुप १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्ने ठूलो कर्पोरेट हाउस बनेको छ । निर्माण क्षेत्रका उद्योगमा पायोनियर मानिएको शंकर ग्रुपले गतवर्ष आफ्नो ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीबाट
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १७ वर्षअघि लिलामी भइसकेको धितो फिर्ता गर्न सनराइज बैंकलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सनराइज बैंकले मर्जर गरेको तत्कालीन नेशनल फाइनान्स कम्पनीले लिलाम गरेको धितोको जग्गा
रिङरोड बाहिर जग्गाको भाउ छोइनसक्नु, आनाकै २६ लाखसम्म मूल्याङ्कन, कुन क्षेत्रको कति ?
काठमाडौं । उपत्यकामा मानिसको बसोबास बाक्लिएसँगै रिङरोडभन्दा बाहिरको जग्गाको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढेको पाइएको छ । बाहिरी जिल्लाको तुलनामा बढी सेवा सुविधा रहेको उपत्यकामा बसाईं सर्ने क्रम बढ्दो छ ।
काठमाडौं । नेपालमा संचालन रहेका व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्ममा २५ वटा कम्पनीले बैंकबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको भेटिएको छ छ । २६ वटा कम्पनीले २ खर्ब १२ अर्ब
काठमाडौं । टिकटक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले भक्तपुरस्थित सिपाडोलको जग्गा प्लटिङ त देख्नु भएकै होला । व्यवस्थित आवासको रुपमा विकास गर्नका लागि शुरु गरिएको प्लटिङ निकै नै भाइरल बन्यो ।
एकवर्ष नबित्दै २ वटा मेडिकल कलेज किनेका डा. सुनिल शर्मा छोटो समयमै यसरी बने अर्बपति
काठमाडौं । पछिल्लो एकवर्षमा डा. सुनिल शर्माले थप २ वटा मेडिकल कलेजमा किनेका छन् । बिराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेका शर्माले एक वर्षको अवधिमा थप २ वटा मेडिकल कलेजमा
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम ६ वर्षपछि पुनः घाटामा गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि निरन्तर नाफा गर्दै आएको निगम आव २०७७/७८ मा भने घाटामा गएको
ओली सरकारको ‘म्याक्रोइकोनोमिक’ चिरफारः जनताको थाप्लोमा दोब्बर बढी ऋण बढ्यो, विकासमा गफमात्रै
काठमाडौं । २०७४ फागुन ३ गतेदेखि मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले पदमुक्त गर्यो । साढे तीन वर्ष अघि दुई तिहाइ मतका साथ सरकारमा शानदार इन्ट्रि गरेका ओलीले यसबीचमा दुई तिहाइबाट बहुमत,
काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल विगत ५ वर्षदेखि विद्युतीय सवारी चढ्दै आइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका उनी आफ्नो निजी खर्चको पनि